HomeIZAO TONTOLO IZAOEOROPEANINA38 OkrainaOrinasa fiaran-dalamby tsy miankina hanomboka ny fandehanana any Ukraine
Orinasa fiaran-dalamby tsy miankina hanomboka ny fandehanana any Ukraine
15 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 Okraina, EOROPEANINA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Headline 0
Orinasa misy lalamby tsy miankina any Ukraine hanomboka sidina
Raha ny filazan'ny minisitry ny fotodrafitrasa ukrainiana Vladislav Krikliy, ny governemanta Okrainiana dia mikasa ny hanangana tetikasa pilotika ho an'ny orinasa tsy miankina amin'ny lalamby mankany amin'ny faran'ny 2019.
Ik dia manana tanjona finaritra isika: ny hanao tetik'asa mpanamory fiaramanidina amin'ny sidina manokana amin'ny faran'ny taona, hoy i Krikliy.
Hatao ho pilotam-bola ny tetikasa ary hiasa ho an'ny fiara fitaterana entana fotsiny izao. Tsy mbola resahina ny fampidirana goavana momba ny fanomezana traction amin'ireo orinasa tsy miankina amin'ny lalamby.
Irse Tsy ho marina izany raha ny faritra mahasoa indrindra dia omena orinasa lehibe. Na izany aza, tsara ny traction iray satria tato anatin'ny taona vitsy, ny Railway Okrainiana dia tsy afaka nanome traction feno. ”
Araka ny filazan'i Krikliy dia tsy mbola voafaritra ireo tsipika izay hampiasain'ny lokomototra manokana. Safidy marobe no dinihina.
Ny hany orinasa tokana mahazo ny fitaterana lalamby any Ukraine dia ny Railway State Ukrzaliznytsia. Voalaza fa rehefa manomboka ny fitaterana ny gara any Okraina ny orinasa tsy miankina dia hametraka ny vidin'izy ireo manokana, fa ny fanjakana kosa dia tokony handrindrana ireo làlana izay hiasan'izy ireo.
Elvan: Ny seranam-piaramanidina Ordu-Giresun dia hanomboka ny fandehanana an-dalamby amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 06 / 02 / 2015 Elvan: Ordu-Giresun Airport voalohany ny antsasaky ny voalahatra başlayacak.ulaştır ny taona, Maritime Raharaha sy Serasera Minisitry Lutfi Elvan, vao voalohany teo amin'ny ranomasina, dia hoy izy filler tamin'ny hanao ny Ordu-Giresun Airport dia vita tamin'ny faran'ny volana Martsa any Torkia. Elvan, dia manomboka ny sidina ny saha amin'ny faran'ny taona voalohany, hoy izy. Ny minisitra Lütfi Elvan dia nanao ny dingam-panafihana voalohany tao amin'ny sehatry ny pistes taorian'ny nahavitana ny fanadihadiana momba ny fananganana ny seranam-piaramanidina hameno sy terminal amin'ny helikoptera mitondra azy. Ny Governora Elvan Governora Irfan Balkanlıoğlu sy ireo tompon'andraikitra hafa dia nandray ny tafika. Taorian'ny fivoriana ny faritra fiandrasana tao amin'ny faritra fiara izay niandry ny faritra fametrahana sy ny fanadihadiana nataon'i Elvan, dia nanao fanambarana mikasika ny seranam-piaramanidina. Ho an'ny kendileri androany
Ny kilometatra 22 kilometatra no hanombohana ny sidina Kadikoy-Kartal 17 amin'ny volana aogositra 08 / 08 / 2012 Ny fametrahana ny fampiasam-bolan'ny lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny Repoblika dia misokatra. Ny tontalom-pifamoivozana haingana indrindra erak'izao tontolo izao, ny kilometatra 22 kilometatra Kadıköy-Kartal 17 dia hanomboka ny fiaramanidina amin'ny volana Aogositra. Ny iray amin'ireo tetikasam-pitaterana an-dalamby indrindra any Istanbul, ny Kadıköy-Kartal Metro, izay naorina tao 2008, dia vita ary nampidirina haingana araka izay tratra. nanao fandavahana dia natao tamin'izany ambaratonga. Toy ny tonelina haingana indrindra eran-tany, ny fitaovam-pitaterana faran'izay manan-danja indrindra amin'ny seranana Anatoliana dia hotontosaina amin'ny serivisy. Ny lalam-piaramanidin'i Kadıköy-Kartal, 22 kilaometatra, izay fitaovana amin'ny fitaovana teknolojika, dia hitondra mpandeha isan'andro 1-1.5. 2013 dia andrasana hiditra ny serivisy amin'ny faran'ny taona.
Bursa T1 fiarandalamby hanombohana fiaramanidina amin'ny Septambra 25 / 05 / 2013 Ny tsipika Bursa T1 tram dia hanomboka ny sidina amin'ny volana septambra ny Ben'ny tanàna ao amin'ny Bursa Metropolitan Recep Altepe, ny fananganana làlam-by trondro T1, izay nanondro fa ny faran'ny jona fitsidihana ny volana Jona, ny fanokafana sekoly, dia nilaza fa ny fitsangatsanganana ny tram. Napetraka ao amin'ny tsipika 1 ny lamina ary vita ny asa. Ny ben'ny tanàna, Recep Altepe, tao anatin'ny famerenany ny Atatürk Street dia nanambara fa efa ho tapitra ny asa fanamboarana, fitsapana tram-be tamin'ny volana jona, ny fanokafana ireo sekoly nanambara ny fanombohan'ny dia. Ny ben'ny tanàna Altepe dia nanambara fa nanova ny akorany i Bursa ary nandray fepetra hentitra mba ho lasa tanàna maoderina.
Ny Bursa Airlines 3 dia hanomboka fiaramanidina ao anatin'ny volana 14 / 08 / 2013 Bursa Airlines hanomboka sidina in 3 volana: Metropolitan ben'ny tanàna Recep Altepe, Bursa Metropolitan Monisipaly dia naorina teo an Bursa Airlines (BHY) dia nanambara ny iraka dia hanomboka any amin'ny faran'ny volana 3. Fikambanana avy amin'ny Faritra AK, Merinos Atatürk Kongresy ara-kolontsaina Grand Terrace'ta nankalazaina ny fetibe. AK Party Provincial Filoha Sadat Yalcin miaramila, raha lanonana, Praiminisitra lefitra Bülent Arinc, ny ben'ny tanàna Metropolitan Recep Altepe, Bursa mpanao lalàna Mpitarika Matlin, İsmail Aydın, Hakan Cavusoglu, Kemal Şerbetçioğlu, Ismet rano, Tulin Erkal Land, Fiainana Candemir Steel sy Bedrettin Yıldırım , 23. MPs, ben'ny tanàna, olo-tsotra
Ny seranam-piaramanidin'ny Istanbul-Adapazari dia hanomboka alohan'ny Krismasy 02 / 08 / 2014 Ny fiaran-dalamby Commanbul-Adapazari dia hanomboka alohan'ny taom-baovao: hoy ny minisitry ny siansa sy indostria ary teknolojia Fikri Isik nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa hanomboka alohan'ny taom-baovao ny fiaran-dalamby. Ny minisitra Fikri Işık dia nanome fampahalalana momba ny tetik'asa fitaterana an'i Kocaeli nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety. Ny andalana Istanbul-Adapazari dia hanohy hiasa ho an'ny fiaran-dalamby ho an'ny mpanamory fiarandalamby, ary nilaza fa hatsangana ny andro iray 8 dia hampiorina tsipika ambanivohitra, farafaharatsiny, ny fiaran-dalamby mpandeha 1000 dia hiasa alohan'ny fanombohan'ny taona, "hoy izy. Ny minisitra Işık dia nilaza fa hotontosaina ny volavolan-dalàna ho an'ny Avaratr'i Marmara Avaratra amin'ity volana ity ary ny fiomanana ho an'ny lalana Kaynarca-Ağva dia hatsangana eo amin'ny morontsiraka Mainty
Natao ny fanamboarana trano fijanonan'ny fiara fitateram-baravarana Altınordu
Nanomboka tao amin'ny Karakoyun Interchange ny fananganana Viaduct
Elvan: Ny seranam-piaramanidina Ordu-Giresun dia hanomboka ny fandehanana an-dalamby amin'ny tapany voalohany amin'ny taona
Ny kilometatra 22 kilometatra no hanombohana ny sidina Kadikoy-Kartal 17 amin'ny volana aogositra
Bursa T1 fiarandalamby hanombohana fiaramanidina amin'ny Septambra
Ny Bursa Airlines 3 dia hanomboka fiaramanidina ao anatin'ny volana
Ny seranam-piaramanidin'ny Istanbul-Adapazari dia hanomboka alohan'ny Krismasy
Ny vidin'ny Euro-2012 Euro, XNUMX, Road sy Airline Airline.
Slovak Railway Companies any Ankara
Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ao Okraina dia nesorina tamin'ny VAT
Limak mirakitra ny fifanarahana fanamboaran-dàlana ambanin'ny tany ambanin'ny 10 metatra ambanin'ny tany ambanin'ny tany ao Okraina